के एलर्जी शटहरू काम गर्छन्? के तिनीहरू यसको लायक छन्? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी समाचार, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार प्रेस खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के एलर्जी शटहरू काम गर्छन्? के तिनीहरू यसको लायक छन्?
के एलर्जी शटहरू काम गर्छन्? के तिनीहरू यसको लायक छन्?
नाक बाट पानी बग्नु? जाँच गर्नुहोस्। खुजली, पानी आँखा? जाँच गर्नुहोस्। लगातार छींक छ? जाँच गर्नुहोस्। जाँच गर्नुहोस्। मौसमी — वा वर्षैभर — एलर्जीबाट ग्रस्त व्यक्तिहरू नियमित लिन्छन् एलर्जी औषधि , र अझै राहत पाइरहेका छैनन् एलर्जेन इम्युनोथेरापी, अझ राम्ररी एलर्जी शटको रूपमा चिनिन्छ मा हेर्न खोज्न सक्नुहुन्छ। के एलर्जी शटहरू काम गर्छन्? के एलर्जी शटहरू यसको लायक छन्? आफ्नो टिश्यू समात्नुहोस् र पढिरहनुहोस्।
एलर्जी शटहरू के हुन्?
यसका अनुसार विश्वभरि करिब million०० मिलियन मानिसहरू एलर्जीको राइनाइटिसको साथ बाँचिरहेका छन् विश्व एलर्जी संगठन । जब उनीहरू परागकण, मोल्ड, घाँस, धुलो, धुलोको कीरा, घरपालुवा जनावरको छाला, र अन्य धेरै साधारण एलर्जीनहरूको संपर्कमा हुन्छन्, तिनीहरू छींकने, बग्ने नाक, भीड, पानी आँखा, टाउको दुख्ने, खोकी, घाँटी जलन, र खुवाउने मुख जस्ता लक्षणहरू अनुभव गर्दछन्। , घाँटी, वा छाला। एलर्जीले व्यक्तिलाई एकदम दुखी बनाउँदछ विशेष गरी यदि उनीहरू बारम्बार छन् भने।
अमेरिकी एलर्जी, दम र इम्यूनोलोजी एकेडेमी एलर्जी शटहरूलाई दीर्घकालीन उपचारको रूपमा परिभाषित गर्दछ जसले एलर्जीको राइनाइटिस (हे फीवर), एलर्जी दम, नेत्रश्लेष्मलाशोथ (आँखाको एलर्जी), र पराल कीट एलर्जीको लक्षणहरू घटाउन सक्छ। नियमित अल्टर्जेनको थोरै अवधिमा ईन्जेक्सनको साथ (चीजहरू मानिसहरूलाई एलर्जी हुन्छ), शटहरूले समयको साथ संवेदनशीलता कम गर्दछ र लक्षणहरूलाई कम वा हटाउँछ।
प्रोमेथाजिन , डिफेनहाइड्रामिन (बेनाड्रिलमा सक्रिय संघटक), र हाइड्रोक्सिजाइन एलर्जी शटको केही उदाहरणहरू छन्।
एलर्जी शट को विचार गर्नुपर्छ?
त्यहाँ तीन समूहका मानिस छन् जो एलर्जी शटका लागि राम्रा उम्मेद्वार हुन्,यस अनुसार सिमा पटेल, गर्नुहोस् , न्यूयोर्क एलर्जी र न्यूयोर्क शहर मा साइनस केन्द्र मा एक एलर्जी विज्ञ:
मानिसहरूले वर्षभर प्रभावित गरे , वा दुई वा अधिक मौसममा
व्यक्ति जो अन्य उपचारबाट राहत अनुभव गर्दैनन्। यदि औषधी काम गरिरहेको छैन, यो शटबाट उपचार सुरु गर्नका लागि संकेत हो, डा। पटेल वर्णन गर्दछन्।
व्यक्ति जो स्थायी राहत चाहान्छन्, उदाहरण को लागी, यदि तपाईं घरपालुवा जनावर बाट एलर्जी हुनुहुन्छ । एलर्जी औषधीहरूले प्रतिक्रियाको उपचार गर्न सक्दैन, जबकि एलर्जेन इम्युनोथेरापीले सक्छ।
डा। पटेल भन्छन् कि तपाईले अध्ययन गर्नु भएको आधारमा एलर्जीको शटहरू improving 85% बिरामीहरूको लागि लक्षण सुधार गर्न प्रभावकारी हुन सक्छ।
कसरी एलर्जी शटहरू काम गर्दछ?
एलर्जी शटहरू एक प्रिस्क्रिप्शन उपचार हो जुन कार्यालयमा एलर्जी वा ईम्युनोलोजिस्टद्वारा प्रशासित हुन्छन्। तिनीहरू प्राय जसो बीमाले ढाकिएका हुन्छन् जबकि प्रत्येक कार्यालय भ्रमणको लागि एक कापाई आवश्यक पर्दछ। लामो दौडमा, इन्जेक्सनको लागत दैनिक औषधी लिई भन्दा कम हुन सक्छ।
कसैलाई कति एलर्जी छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ, प्रत्येक हिसैमा कति एलर्जी हुन्छन् त्यसमा निर्भर गर्दै उनीहरूलाई हप्तामा एक देखि चार शटहरू लाग्न सक्छ। तिनीहरू 'बच्चा शटहरू' हुन्, यो खोपको समान शट होइन किनभने यो एक सानो सानो सुई हो - यो एक सानो चुटकी जस्तो देखिन्छ, डा। पटेल भन्छन्।
यदि व्यक्तिसँग धेरै एलर्जीनहरू छन् - परागकण, धूलो, जनावरको छाला, मोल्ड र अरूहरू - तिनीहरू सायद चारवटा विभिन्न शीशिकाहरू (शटहरू) हेर्दैछन्। तिनीहरूका लागि मात्र धुलो एलर्जी वा पशुको एलर्जी छ, केवल एउटा शीशिक आवश्यक छ। उपचारका लागि त्यहाँ दुई चरणहरू छन्:
निर्माण चरण: बिरामी अप चरणको दौरान बिरामीहरू डाक्टरको कार्यालयमा साप्ताहिक रूपमा उनीहरूको शटहरू पाउँछन्। यस अवधिमा, खुराक बिस्तारै तीन देखि छ महिनामा बढाइन्छ।
मर्मत चरण: मर्मत चरणमा कम पटक पटक, प्रति महिना एक वा दुई पटक एलर्जी शटहरू समावेश गर्दछ।
एकचोटि कसैले उनीहरूको साप्ताहिक शट प्राप्त गर्दा तिनीहरू डाक्टरको अफिसमा minutes० मिनेट सम्म रहनु पर्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्न तिनीहरूसित एनाफिलक्सिस भनिने गम्भीर प्रतिक्रिया हुँदैन। यसले सूजन, पित्ती, सास फेर्न कठिनाइ, वा रक्तचाप घटाउन सक्छ - र यो जीवन-जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। जे होस् यो दुर्लभ हो, एनाफिलाक्सिस हुन सक्छ जुन यो पहिलो एलर्जी शट हो वा १०० औं इंजेक्शन। आधा घण्टा कुर्नु प्रत्येक इन्जेक्शन पछि आवाश्यक हुन्छ। हल्का साइड इफेक्टहरू पनि सम्भव छ, जस्तै इन्जेक्शन साइट दुखाइ वा एलर्जी लक्षणहरू। सबै पछि, शटमा धेरै एलर्जी हुन्छ जो कसैलाई एलर्जी हुन्छ।
के त्यहाँ कुनै विकल्पहरू छन्?
एलर्जी ट्याब्लेटहरू वा ड्रपहरू जसलाई सबलिंगुअल इम्युनोथेरापी (एसएलआईटी) भनिन्छ अर्को र इम्युनोथेरापीको नयाँ रूप हो र कसैको जिब्रोमुनि विशिष्ट एलर्जेनको साथ ट्याब्लेट वा तरल ड्रप राख्नु समावेश गर्दछ। यो शटहरू जत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ र एक पटक तपाईंले आफ्नो एलर्जी विज्ञबाट तिनीहरूलाई प्राप्त गर्दा घरमा पनि लैजान सकिन्छ। तिनीहरू एक राम्रो विकल्प हो यदि तपाईं सुईहरूसँग डराउनुहुन्छ, वा साप्ताहिक अपोइन्टमेन्टहरूमा यो बनाउन सक्नुहुन्न।
तर, प्रत्येक ट्याब्लेट वा ड्रपले मात्र एउटा अलर्जीन प्रदान गर्दछ।यो रूख पराग एलर्जीको रोकथामको लागि उपलब्ध छैन, तर यो उपचार विकल्प हो जुन घाँस, रागवीड र डस्ट माइट एलर्जीको लागि उपलब्ध छ, डा गुप्ता भन्छन्।
केहि SLIT ब्रान्ड नामहरू समावेश गर्दछ Odactra , ग्रास्टेक , ओरलाइर , र राग्विटेक ।
Celebrex एक काउन्टर औषधि भन्दा माथि छ
के एलर्जी शटहरू यसको लायक छन्?
केही व्यक्ति एलर्जी शटहरू सुरू गर्न हिचकिचाउँदछन् किनकि उनीहरूलाई समय प्रतिबद्धताको आवश्यक पर्दछ।एलर्जी शटहरू तीन देखि पाँच बर्षमा दिइन्छ र उपचार समाप्त गरेपछि धेरै वर्षसम्म तपाईंको एलर्जीलाई वशमा राख्न सक्छ, भन्छन् रतिका गुप्ता, एमडी , ईएनटीमा एक एलर्जी विज्ञ र न्यूयोर्कको ब्रुकलिनमा एलर्जी एसोसिएट्स। यद्यपि, लक्षणहरू समयसँगै फर्कन सक्दछन्।
एलर्जीस्टहरूले निर्णय गर्दछ कि जब बिरामीहरूले उनीहरूको लक्षणहरूको आधारमा शटहरू रोक्न सक्छन्। तीन वर्षमा यदि कोहीले हराएको डोज बिना नियमित रूपमा शटहरू प्राप्त गर्दैछ र तिनीहरूलाई अब लक्षणहरू छैनन् भने, तिनीहरू रोक्न सक्छन्। तर सामान्यतया, व्यक्तिसँग अझै केहि हल्का लक्षणहरू छन्, त्यसैले तिनीहरू पूर्ण पाँच वर्षसम्म जारी राख्न आवश्यक छ। हो, त्यो लामो छ तर भुक्तान केही जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। अधिकांश व्यक्तिहरूले यसको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न यसको लायक एलर्जी शटहरू पाउँदछन्।
Mucinex DM खुराक, फारम, र शक्तिहरू
के त्यहाँ एक भाइरस अहिले वरिपरि चलिरहेको छ?
Adderall तपाइँ एक औषधि परीक्षण असफल बनाउन हुनेछ
तपाइँ कसरी स्वाभाविक रूप मा एक खमीर संक्रमण को उपचार गर्नुहुन्छ
70 मिलीग्राम vyvanse बराबर कति adderall